Marketing Acronyms, Sales Acronyms, Technology Acronyms ary ny fanafohezana Glossary | Martech Zone
Glosary famaritana ny fanaovan-tsoa sy fanafohezana
Toa isan-kerinandro aho dia mahita na mianatra fanafohezana hafa. Hitahiry lisitra mavitrika amin'izy ireo aho eto! Aza misalasala mitsambikina amin'ny alfabeta ho an'ny fanafohezana ny varotra, fanafohezana marketing, na fanafohezana ny teknolojia varotra sy marketing mitady ianao:
Isa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Famaritana sy fanafohezana ny varotra & marketing (isa)
2FA - Fahamarinana roa: fiarovana fanampiny ampiasaina hiantohana ny fiarovana ireo kaonty an-tserasera mihoatra ny solonanarana sy teny miafina fotsiny. Ny mpampiasa dia miditra ny teny miafiny ary avy eo dia takiana hiditra amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny fanamarinana, indraindray mamaly amin'ny kaody alefa amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, mailaka, na amin'ny alàlan'ny fampiharana fanamarinana.
4P - Vokatra, vidiny, toerana, fampiroboroboana: ny maodelin'ny marketing 4P dia mandrakotra ny vokatra na serivisy amidinao, ohatrinona ny vola ampanaovinao sy ny sandany, ny toerana ilainao hampiroboroboana azy, ary ny fomba hampiroboroboanao azy.
Famaritana sy fanafohezana (A) ny varotra sy ny varotra (A)
ABC - Mikatona foana: Ity no voalohany amin'ny fanafohezana ny varotra izay tokony ianaranao amin'ny maha mpivarotra tanora anao! Ny fomba fiasa no tena izy. Ny hoe mpivarotra mahomby dia midika fa mila amin'ny ABC ianao.
ABM - Marketing amin'ny kaonty: fantatra amin'ny anarana hoe marketing kaonty lehibe, ABM dia paikady stratejika iray izay mandrindrana ny fifandraisana amin'ny varotra sy ny varotra marketing ary mikendry ny fanaovana doka amin'ny tombam-bidin'ny mpanjifa efa voafaritra mialoha.
ACoS - Ny vidin'ny varotra: metric ampiasaina handrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra Amazon Sponsored Products. ACoS dia manondro ny tahan'ny fandaniana doka amin'ny varotra kendrena ary isaina amin'ity paikady ity: ACoS = fandaniana doka sales.
ACV - Salanisan'ny salanisan'ny mpanjifa: Ny fitazonana sy fivarotana mpanjifa amin'izao fotoana izao dia lafo kokoa noho ny fahazoana ny fitokisan'ny iray vaovao. Rehefa mandeha ny fotoana, ny orinasa dia manara-maso ny karama ohatrinona isaky ny mpanjifa azony ary mitady hampitombo izany. Ny solontenan'ny kaonty dia matetika omena onitra amin'ny fahaizany mampitombo ny ACV.
AE - Account Executive: Ity dia ekipa mpivarotra izay manidy ny fifampiraharahana amin'ny fotoana mahomby amin'ny varotra. Izy ireo amin'ny ankapobeny dia ny ekipa mpikambana ao amin'ny kaonty voatondro ho mpivarotra voalohany amin'izany kaonty izany.
AI - Fahaizana artifisialy: Sampana iray amin'ny siansa momba ny informatika miompana amin'ny fananganana milina marani-tsaina mahavita asa izay mazàna mitaky faharanitan-tsaina amin'ny olombelona. Fandrosoana amin'ny fianarana milina ary ny fianarana lalina dia miteraka fiovan'ny paradigma amin'ny sehatra rehetra amin'ny sehatry ny teknolojia.
AIDA - Fiheverana, fahalianana, faniriana, hetsika: Ity dia fomba fanentanana natao hanentanana ny olona hividy amin'ny alàlan'ny fisintomana ny sainy, ny fahalianany, ny faniriany ilay vokatra, ary avy eo mitaona azy ireo handray andraikitra. Ny AIDI dia fomba mahomby amin'ny antso mangatsiaka sy ny dokambarotra valiny mivantana.
AM - Mpitantana kaonty: Ny AM dia mpivarotra tompon'andraikitra amin'ny fitantanana kaonty mpanjifa lehibe na vondrona kaonty marobe.
API - Fampivoarana amin'ny fandaharana fampiharana: Fomba entina ifampiresahan'ny rafitra tsy mitovy. Ny fangatahana sy ny valiny dia arafitra mba hahafahan'izy ireo mifampiresaka. Toy ny mpizaha tany mangataka HTTP ary mamerina HTML, ny API dia angatahina amin'ny fangatahana HTTP ary hamerina XML na JSON.
AR - Augmented zava-misy: teknolojia manalavitra ny traikefa virtoaly novokarin'ny solosaina tamin'ny fahitan'ny mpampiasa ny tontolo tena izy, ka manome fomba fijery mitambatra.
ARPA - MRR salanisa (fidiram-bola miverimberina isam-bolana) Isaky ny kaonty - Ity dia tarehimarika iray izay mampiditra ny habetsaky ny vola miditra isam-bolana amin'ny kaonty rehetra
ARR - Vola azo averimberina isan-taona: Ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny orinasa mamokatra fifanarahana isan-taona. ARR = 12 X MRR
MITOVY AMIN'NY - Haingam-pandeha havalina: dia mari-pamantarana zava-dehibe momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay mandrefy ny fotoana naharetan'ny mpanjifa alohan'ny hahafahany miresaka amin'ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
ASO - Optimization App Store: fampifangaroana ny paikady, fitaovana, fombafomba ary teknika naparitaka mba hanampiana ny laharan-tariby findainao hijoro tsara kokoa sy hanara-maso ny laharany ao anatin'ny valin'ny fikarohana App Store.
ASR - Afanekena kabary utomatika: ny fahafahan'ny rafitra mahatakatra sy manodina ny kabary voajanahary. Ny rafitra ASR dia ampiasaina amin'ny mpanampy amin'ny feo, chatbot, fandikan-teny amin'ny milina, sns.
AT - Teknolojia manampy: ny haitao rehetra ampiasain'ny olona manana fahasembanana hampitomboana, hikolokoloana, na hanatsarana ny fahaizany miasa.
ATT - Fangaraharana amin'ny fanarahana fampiharana: Sehatra iray amin'ny fitaovana Apple iOS izay manome ny mpampiasa hanana fahaizana roa hanomezana alàlana sy hahita ny fomba hanarahan'ny mpampiasa azy na ny alàlan'ny rindranasa finday ny angon-drakatr'izy ireo.
AutoML - Fianarana milina mandeha ho azy: Fampielezana machine Learning ao anatin'ny Salesforce izay azo zakaina amin'ny alàlan'ny Salesforce izay mahazaka ny mpanjifa rehetra sy ny tranga fampiasana rehetra tsy mila apetrak'ireo mpahay siansa angona.
AWS - Amazon Web Services: Ny serivisy web an'ny Amazon dia manana serivisy mihoatra ny 175 ho an'ny teknolojia, indostria ary tranga maro karazana izay manolotra fomba fandoavam-bola amin'ny vidiny.
Famaritana sy fanafohezana (B) ny varotra sy ny marketing (B)
B2B - Asa aman-draharaha: B2B dia mamaritra ny lahasa fivarotana na fivarotana amina orinasa hafa. Fivarotana sy serivisy fivarotana maro no mikarakara orinasa hafa ary ny ankamaroan'ny fifanakalozana B2B dia mitranga ao ambadiky ny seho alohan'ny ahatongavan'ny vokatra amin'ny mpanjifa.
B2C - Orinasa ho an'ny mpanjifa: B2C dia maodelin'ny fandraharahana nentim-paharazana an'ny orinasa mivarotra mivantana amin'ny mpanjifa. Ny serivisy marketing B2C dia misy ny banky an-tserasera, ny lavanty ary ny dia fa tsy ny fivarotana fotsiny.
B2B2C - Orinasa amin'ny orinasa ho an'ny mpanjifa: maodely e-varotra izay manambatra ny B2B sy B2C ho an'ny fifanakalozana vokatra na serivisy feno. Mampivelatra vokatra, vahaolana na serivisy ny orinasa iray ary manome izany ho an'ireo mpampiasa farany ny orinasa.
BDBP – Fanapahan-kevitry ny fividianana ny Brand Persona: ny lisitr'ireo antony mety hanosika ampahany manokana amin'ny mpihaino kendrenao hividy zavatra aminao ary koa ny antony mety hilazana azy ireo tsy hanao izany.
BI - Business Intelligence: Fitaovana na sehatra iray ahafahan'ny mpandinika miditra amin'ny angon-drakitra, manodinkodina azy ary maneho azy avy eo. Ny tatitra na ny valin'ny dashboard dia ahafahan'ny mpitarika orinasa manara-maso ny KPI sy ny angona hafa hahafahana mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa.
BIMI - Famantarana marika momba ny famantarana ny hafatra: famaritana mailaka ahafahana mampiasa ny marika voafehy marika ao anatin'ny manohana mpanjifa mailaka. BIMI dia manararaotra ny asa napetraky ny fikambanana iray amin'ny fanaparitahana ny fiarovana DMARC, amin'ny alàlan'ny fitondrana logo famantarana any amin'ny boaty fidirana ho an'ny mpanjifa. Mba hiseho ny sary famantarana ny marika, ny mailaka dia tsy maintsy mandalo ny fanamarinana fanamarinana DMARC, hahazoana antoka fa tsy nalaina tahaka ny fonenan'ilay fikambanana.
BOGO - Mividy iray mahazo iray: Ny "mividy iray, mahazoa maimaim-poana" na "roa amin'ny vidin'ny iray" dia endrika iray hampiroboroboana ny varotra.
BOPIS - Mividiana trano fivarotana an-tserasera: Fomba fiasa iray ahafahan'ny mpanjifa mividy an-tserasera ary manangona eo noho eo amin'ny fivarotana antsinjarany. Nisy fitomboana sy fananganana manan-danja io noho ny areti-mandringana. Ny mpivarotra sasany aza dia misy tobim-pandefasana fiara-miasa izay ametrahan'ny mpiasa iray entana mivantana ao anaty fiaranao.
BR - Tadiavo: Ny tahan'ny fihenam-bidy dia manondro ny hetsika ataon'ny mpampiasa rehefa ao amin'ny tranonkalanao. Raha miakatra amin'ny pejy izy ireo ary lasa mankany amin'ny tranokala hafa, dia niala tamin'ny pejinao izy ireo. Izy io koa dia afaka miresaka mailaka izay manondro mailaka izay tsy tonga amin'ny boaty. Izy io dia KPI amin'ny fahombiazan'ny atiny ary ny tahan'ny fihenam-bidy avo lenta dia mety hanondro ny atiny marketing tsy mahomby ankoatry ny olana hafa.
BANT - Mila fe-potoana ny fahefan'ny tetibola: Ity dia raikipohy ampiasaina hamantarana raha fotoana mety hivarotana amina vinavina.
BDR - Solontenan'ny fampandrosoana ny orinasa: Andraikitry ny varotra ambaratonga ambony izay tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana, ny mpiara-miombon'antoka ary ny fotoana vaovao.
Famaritana sy fanafohezana (C) Sales & Marketing (C)
CAC - Ny vidin'ny mpanjifa - Iray amin'ireo fanafohezana ny varotra amin'ny fandrefesana ny ROI. Ny vidiny rehetra mifandraika amin'ny fahazoana mpanjifa. Ny paika fanaovana kajy ny CAC dia (mandany + karama + kaomisiona + bonus + overhead) / # mpanjifa vaovao mandritra izany fotoana izany.
CAN-SPAM - Fifehezana ny fanafihana pôrnôgrafia tsy misy fangatahana sy marketing: Ity ny lalàna amerikana nolaniana tamin'ny 2003 izay mandrara ny orinasa tsy handefa mailaka raha tsy mahazo alalana. Mila mampiditra safidy tsy hisoratra anarana amin'ny mailaka rehetra ianao ary tsy tokony hanampy anarana ao raha tsy mahazo alalana voalaza.
CASS - Rafitra fanohanana ny fahamarinan-toerana: ahafahan'ny United States Post Service (USPS) manombatombana ny maha-marina ny rindrambaiko manitsy sy mifanitsy amin'ireo adiresy an-dalambe.
CCPA - Fitsipika momba ny fiainana manokana an'ny mpanjifa any California: lalàna iray natao hanatsarana ny zon'ny tsiambaratelo sy fiarovana ny mpanjifa ho an'ny mponina any California, Etazonia.
CCR - Ny sandan'ny mpanjifa: Mika ampiasaina handrefesana ny fihazonana sy ny sandan'ny mpanjifa. Ny paika hamaritana ny CCR dia: CR = (# an'ny mpanjifa amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana - mpanjifa # amin'ny faran'ny vanim-potoana fandrefesana) / (# mpanjifa amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana fandrefesana)
CDP - Sehatra ho an'ny mpanjifa: angon-drakitra mpanjifa afovoany, maharitra, mitambatra izay azo idirana amin'ny rafitra hafa. Ny data dia nalaina avy amina loharano marobe, nodiovina ary natambatra mba hamoronana mombamomba ny mpanjifa tokana (fantatra ihany koa amin'ny fomba fijery 360 degre). Ity data ity dia azo ampiasaina amin'ny tanjona mandeha ho azy amin'ny marketing na amin'ny alàlan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny varotra mba hahatakarana bebe kokoa sy hamaly ny filan'ny mpanjifa. Ny data dia mety ampidirina amin'ny rafi-barotra ihany koa mba hamaritana tsara kokoa sy hikendry ny mpanjifa mifototra amin'ny fihetsik'izy ireo.
CLM - Fitantanana ny fiainana andramena fifanarahana: ny fitantanana mavitrika sy ara-dalàna ny fifanarahana iray manomboka amin'ny fanombohana amin'ny alalàn'ny loka, fanajana ary fanavaozana. Ny fampiharana CLM dia mety hiteraka fanatsarana lehibe amin'ny tahiry sy fahombiazan'ny vidiny.
CLTV na CLV - Sarobidy mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa: Tetikasa iray izay mampifandray ny tombom-barotra amin'ny fifandraisana mandritra ny androm-piainan'ny mpanjifa iray manontolo.
CLS - Fiovan'ny Layout Cumulative: Ny refin'ny fampiasan'i Google ny mpampiasa sy ny pejy dia misy ny fitoniana hita ao aminy Vitaly Core Web.
CMO - Lehiben'ny Marketing: Sehatra mpanatanteraka tompon'andraikitra amin'ny fitarihana fampandrenesana, fandraisana andraikitra ary fangatahana varotra (MQL) ao anaty fikambanana.
CMP - Sehatra Marketing amin'ny atiny: Sehatra iray hanampiana ireo mpivarotra atiny handrafitra, hiara-miasa, hanaiky ary hizara atiny ho an'ny tranokala, bilaogy, media sosialy, trano fitahirizana atiny, ary / na dokam-barotra.
CMRR - Vola azo hatrany isam-bolana: Fanafohezana fivarotana iray hafa avy amin'ny lafiny kaonty. Ity dia raikipohy hikajiana ny MMR amin'ny taom-piasana ho avy. Ny paika fanaovana kajy ny CMRR dia (MMR amin'izao fotoana izao + MMR manolo-tena amin'ny ho avy, ahena ny MMR an'ny mpanjifa tsy azo havaozina amin'ny taom-piasana.
CMS - Content Management System: Ity dia manondro rindranasa manambatra sy manamora ny famoronana, fanovana, fitantanana ary fizarana atiny. Matetika ampiasaina amin'ny tranonkala iray, ohatra an'ny CMS dia Hubspot ary WordPress.
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow ary Key: maodely miloko mampihena, miorina amin'ny maodely miloko CMY, ampiasaina amin'ny fanontana loko. CMYK dia manondro ireo takelaka ranomainty efatra ampiasaina amin'ny fanontana loko sasany: cyan, magenta, mavo ary lakile.
CNN - Ctambajotra Neural amin'nyvolisiona: karazana tambajotran-tsiranoka lalina izay matetika ampiasaina amin'ny lahasa fahitan'ny solosaina.
COB - Akaiky ny orinasa: Toy ny…… Mila mihaona amin'ny quota amin'ny volana mey avy amin'ny COB isika. ” Ampiasaina matetika amin'ny EOD (Faran'ny Andro). Raha ara-tantara dia midika hoe 5:00 hariva ny COB / EOD.
CPC - Vidiny isaky ny kitiho: Ity dia fomba iray fampiasan'ny mpanonta vola amin'ny habaka doka amin'ny tranokala. Ny dokam-barotra ihany no mandoa ny doka rehefa kitihina izy io fa tsy fampirantiana. Afaka miseho amin'ny tranokala na pejy an-jatony izy io, fa raha tsy hoe mandray andraikitra dia tsy misy sarany.
CPG - Entana fonosana ho an'ny mpanjifa: Vokatra amidy haingana ary amin'ny vidiny somary ambany ihany. Ohatra amin'izany ny entam-pianakaviana tsy maharitra toy ny sakafo fonosina, zava-pisotro, kojakoja fidiovana, vatomamy, kosmetika, zava-mahadomelina lafo vidy, entana maina ary zavatra hafa azo ampiasaina.
CPI - Tondro fampisehoana ny mpanjifa: Ny metrika dia nifantoka tamin'ny fahatsapan'ny mpanjifa toy ny fotoana hamahana, ny fananana loharano, ny fampiasana azy mora, ny mety hanomezana torolàlana ary ny sandan'ny vokatra na serivisy. Ireo metrika ireo dia azo idirana mivantana amin'ny fitazonana ny mpanjifa, ny fitomboan'ny fahazoana ary ny sandam-pisondrotana isaky ny mpanjifa.
CPL - Cost isaky ny mitarika: CPL dia mihevitra ny vola lany rehetra hiteraka fitarihana. Anisan'izany ny dolara fanaovana dokam-barotra lany, famoronana antoka, saram-pampiantranoana web, ary vidiny hafa isan-karazany, ohatra.
CPM - Vidiny isan'arivony: Ny CPM dia fomba iray hafa ampiasain'ny mpitory hitaky vola amin'ny dokam-barotra. Ity fomba ity dia miakatra isaky ny 1000 ny fiatraikany (ny M no isa romana ho an'ny 1000). Ampangaina ny mpanao dokam-barotra isaky ny mahita ny doka fa tsy impiry na impiry na kitihina.
CPQ - Ampifanaraho ny santionany amin'ny vidiny: Configure, rindrambaiko mitanisa ny vidiny dia teny ampiasaina amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha (B2B) hilazana ireo rafitra rindrambaiko izay manampy ny mpivarotra mitanisa ireo vokatra sarotra sy azo ovaina.
CRM - Customer Relationship Management: CRM dia karazana rindrambaiko mamela ny orinasa hitantana sy handinika ny fifandraisan'ny mpanjifa mandritra ny fifandraisan'izy ireo sy ny fiainany mba hanatsarana ireo fifandraisana ireo. Ny rindrambaiko CRM dia afaka manampy anao hanova ny fitarika, hikolokolo ny varotra ary hanampy amin'ny fitazonana ny mpanjifa.
CR - Tovana mivadika: Ny isan'ny olona mihetsika, zaraina amin'ny isa mety misy. Ohatra, raha mahatratra prospect 100 sy valiny 25 ny fampielezana mailaka ataonao dia 25% ny tahan'ny fiovanao.
CRO - chief Mpanambola: Mpanatanteraka izay manara-maso ny varotra sy ny varotra eo amin'ny orinasa iray.
CRO - Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po: Ity fanafohezana ity dia fohy noho ny fijerena tsara ny paikadim-barotra ao anatin'izany ny tranokala, pejy fandraisana, haino aman-jery sosialy, ary CTA hanatsarana ny isan'ny vinavina izay navadika ho mpanjifa.
CRR - Taham-pitanana ny mpanjifa: Ny isan-jaton'ny mpanjifa mitazona anao mifandraika amin'ny isa nanananao tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana (tsy manisa mpanjifa vaovao).
CSV - Soatoavina misaraka koma: Izy io dia endrika fisie izay matetika ampiasaina amin'ny fanondranana sy fanafarana data ao anaty rafitra. Araka ny tondroin'ilay anarana, ny rakitra CSV dia mampiasa koma mba hampisarahana ny soatoavina ao amin'ny data.
CTA - Miantsoa hanao asa: Ny tanjon'ny marketing amin'ny atiny dia ny mampahafantatra, manabe na mampiala voly ny mpamaky, saingy ny tanjon'ny atiny rehetra dia ny fampanaovan'ny mpamaky hetsika ny vakiteny novakiany. Ny CTA dia mety ho rohy, bokotra, sary na rohy web izay manosika ny mpamaky hihetsika amin'ny fisintomana, miantso, misoratra anarana na manatrika hetsika iray.
CTOR - Taham-pandraisana-hanokafana: Ny tahan'ny Click-to-open dia ny isan'ny tsindry amin'ny isan'ny mailaka nosokafana fa tsy ny isan'ny mailaka nalefa. Ity metrika ity dia manome valiny momba ny fomba nanohizan'ny famolavolana sy ny fandefasana hafatra tamin'ny mpihaino anao, satria ireo tsindry ireo dia avy amin'ny olona izay nahita ny mailaka nataonao ihany.
CTR - Kitiho ny tahan'ny: CTR dia KPI mifandraika amin'ny CTA… ahoana izany ho an'ny lasopy abidia kely! Ny pejy web na ny tahan'ny tsindry Click-through mailaka dia mandrefy ny isan-jaton'ny mpamaky manao ny hetsika manaraka. Ohatra, raha misy pejy fidinana, ny CTR dia ny isan'ny olona mitsidika ny pejy zaraina amin'ny isa izay mandray andraikitra ary miroso amin'ny dingana manaraka.
CTV - TV mivantana: fahitalavitra manana fifandraisana ethernet na afaka mifandray amin'ny Internet tsy misy tariby, ao anatin'izany ny fahitalavitra izay ampiasaina ho fampisehoana mifandray amin'ny fitaovana hafa izay manana fidirana amin'ny Internet.
CWV - Vitaly Core Web: Andiana metrikan'ny tontolon'ny mpampiasa Google mifototra amin'ny tena izy, izay mamaritra ny lafiny lehibe amin'ny traikefan'ny mpampiasa. Hamaky bebe kokoa.
CX - Customer Experience: refy iray amin'ireo teboka rehetra ifandraisan'ny mpanjifa amin'ny orinasanao sy ny marikao. Mety tafiditra ao anatin'izany ny fampiasana ny vokatrao na serivisinao, ny fidirana amin'ny tranokalanao, ary ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ireo ekipa mpivarotra anao.
Famaritana sy fanafohezana (D)
DaaS – Data ho serivisy: fitaovana mifototra amin'ny rahona ampiasaina amin'ny fanatsarana, fanamarinana, fanavaozana, fikarohana, fampidirana ary fanjifana data.
DAM - Digital Asset Management: Sehatra sy rafitra fitehirizana tahiry haino aman-jery manankarena ao anatin'izany ny sary sy horonan-tsary. Ireo sehatra ireo dia ahafahan'ny orinasa mitantana ny fananany rehefa mamorona, mitahiry, mandamina, mizara ary - tsy voatery - manova ny atiny eken'ny marika in toerana afovoany.
DBOR - Database of record: Ny loharanom-pahalalana momba ny fifandraisanao amin'ireo rafitra manana ny vaovao farany. Fantatra matetika amin'ny hoe loharanon'ny fahamarinana.
DCO - Fanatsarana ny atiny dinamika: mampiseho ny haitao fanaovana dokam-barotra izay mamorona doka manokana mifototra amin'ny angona momba ny mpijery amin'ny fotoana tena izy rehefa andefasana ny doka. Ny fanaingoana ny zavaboary dia mavitrika, voasedra ary manatsara - ary mitombo ny tahan'ny click-through sy ny fiovam-po.
DL - Fianarana lalina: dia manondro ny asa ianaran'ny milina izay mampiasa tambajotra neural misy sosona maro. Mandritra izany fotoana izany, ny fampitomboana ny isan'ny sosona dia mitaky herin'ny fanodinana solosaina bebe kokoa ary matetika ny fotoana fampiofanana lava kokoa ho an'ilay maodely.
DMP - Sehatra fitantanana data: Sehatra iray manambatra ny angon-drakitra voalohany amin'ny mpihaino (kaonty, serivisy ho an'ny mpanjifa, CRM, sns.) Ary / na angona fahatelo (fitondran-tena, demografika, jeografika) mba hahafahanao mikendry azy ireo hahomby kokoa.
DPI - Teboka isaky ny santimetatra: Ny famahana, araka ny refesina amin'ny isan'ny piksely vitaina injeniera isaky ny santimetatra ao amin'ny efijery na pirinty amin'ny fitaovana iray.
DRR - Tahan'ny fihazonana dolara: Ny isan-jaton'ny vola miditra aminao dia mifandraika amin'ny karama azonao tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana (tsy manisa karama vaovao). Fomba fikajiana an'io ny fizarana mpanjifa amin'ny alàlan'ny vola miditra, avy eo ny fikajiana ny CRR isaky ny laharana.
DSP - Sehatra ilain'ny fangatahana: Sehatra iray amin'ny fividianana doka izay miditra amin'ny vokatra dokambarotra marobe ary ahafahanao mikendry sy manome tolo-kevitra amin'ny fahatsapana ara-potoana.
DXP - Sehatra fanandramana nomerika: lozisialy orinasa ho an'ny fanovana nomerika mifantoka amin'ny fanatsarana ny zavatra niainan'ny mpanjifa. Ireo sehatra ireo dia mety ho vokatra tokana nefa matetika dia karazana vokatra mampiditra ny asa aman-draharaha niomerika sy ny traikefan'ny mpanjifa mifandray. Miaraka amin'ny fampifangaroana azy ireo dia manome analytics sy fahitana mifantoka amin'ny zavatra niainan'ny mpanjifa ihany koa izy ireo.
Famaritana sy fanafohezana (E)
ELP - Sehatra fihainoana orinasa: Sehatra iray manara-maso ireo nomerika momba ny indostria, marika, mpifaninana na teny lakile anao ary manampy anao handrefy, hamakafaka ary hamaly izay voalaza.
ERP - Enterprise Resource Planning: ny fitantanana mitambatra ny fizotry ny asa lehibe manerana ny orinasa lehibe.
ESM - Marketing amin'ny sonia mailaka: ny fampidirana sonia mailaka marika tsy tapaka manerana ny fikambanana, mazàna miaraka amina antso an-tariby sy azo trandrahana mba hananganana fahatsiarovan-tena sy handroahana ny fivadihan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny mailaka 1: 1 izay alefa avy ao anaty fikambanana.
ESP - Mpanome tolotra mailaka: Sehatra iray ahafahanao mandefa fifandraisana be dia be amin'ny varotra na mailaka amin'ny fifanakalozana, mitantana mpamandrika, ary manaraka ny fitsipiky ny mailaka.
EOD - Faran'ny andro: Toy ny…… Mila mihaona ny fatran'ny Mey amin'ny EOD isika. ” Ampiasaina matetika amin'ny COB (Close of Business). Raha ara-tantara dia midika hoe 5 hariva ny COB / EOD
Famaritana sy fanafohezana (F) Sales & Marketing (F)
FAB - Endri-javatra, tombontsoa tombony: Iray amin'ireo fanafohezan-teny momba ny varotra hetaheta, ity dia mampatsiahy ireo mpikambana ao amin'ny ekipa mpivarotra hifantoka amin'ny tombony azon'ny mpanjifa amin'ny vokatra na serivisy, fa tsy izay amidiny.
FIP - Fanemorana ny fidirana voalohany: Ny refin'ny Google ny fampiasan'ny mpampiasa sy ny pejy ao aminy Vitaly Core Web.
FKP - Facial Keypoints: Torohevitra matetika kasaina manodidina ny orona, ny maso ary ny vava, mba hamoronana sonia tarehy tsy manam-paharoa ho an'ny olona tsirairay.
FUD - Tahotra, tsy fahatokisana, fisalasalana: Fomba fivarotana izay ampiasaina hampiala ny mpanjifa, na tsy hisafidy ny hiara-hiasa amin'ny mpifaninana amin'ny fanomezana fampahalalana izay mitarika fisalasalana.
Famaritana sy fanafohezana (G) ny varotra sy ny marketing (G)
GA - Google Analytics: Ity no fitaovana Google manampy ny mpivarotra hahatakatra tsara kokoa ny mpihaino, ny tratrany, ny asany ary ny refiny.
GAID - Google Advertising ID: mari-pamantarana tsy manam-paharoa, omena an'ireo mpanao dokambarotra hanarahana fitaovana Android. Ny mpampiasa dia afaka mamerina ny GAID an'ny fitaovany na manafoana azy ireo hanilihana ny fitaovany tsy hanaraka.
GAN - Generative Adversarial Net: tambajotra neural izay azo ampiasaina hamoronana atiny vaovao sy tsy manam-paharoa.
GDD - Famolavolana tarihin'ny fitomboana: Ity dia endrika na famolavolana tranokala an-tsitrapo fanitsiana manao fanitsiana mitohy data.
GDPR - General Data Protection Regulation: Fitsipika momba ny fiarovana ny angon-drakitra sy ny fiainana manokana ao amin'ny Vondrona eropeana sy ny faritra ara-toekarena eropeana. Izy io koa dia miresaka momba ny famindrana angona manokana any ivelan'ny faritra EU sy EEA.
GUI - Fifandraisan'ny mpampiasa kisary: rafitr'ireo singa hita maso mifandraika amin'ny rindrambaiko solosaina.
GXM - Fitantanana traikefa amin'ny fanomezana: paikady handefasana fanomezana sy karatra fanomezana nomerika amin'ny vina aman-jery ho an'ny mpanjifa hitarika fahatsiarovan-tena, fahazoana, tsy fivadihana ary fitazomana.
Famaritana sy fanafohezana (H) varotra sy varotra (H)
H2H - Olombelona-to-olombelona: 1: 1 ny varotra manokana sy ny ezaky ny varotra, matetika ampitomboina amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy, izay misy solontenan'ny orinasa iray mandefa fanomezana na hafatra manokana ho an'ny tanjona hanentanana ny fifamofoana.
HTML - Fiteny fanoratana hypertext: HTML dia andiam-pitsipika ampiasain'ny mpandahatra programa hamoronana pejin-tranonkala. Izy io dia mamaritra ny atiny, rafitra, lahatsoratra, sary ary zavatra ampiasaina amin'ny pejin-tranonkala. Androany, ny ankamaroan'ny rindrambaiko fananganana tranonkala dia manana HTML ao aoriana.
HTTP - Protocol famindrana hypertext: protokolan'ny fampiharana ho an'ny rafitry ny fampahalalam-baovao voazara, iaraha-miasa, i hypermedia.
HTTPS - Protocol famindrana hypertext: fanitarana ny Protocol Transfer Hypertext. Izy io dia ampiasaina amin'ny fifandraisana azo antoka amin'ny tambajotra solosaina ary be mpampiasa amin'ny Internet. Ao amin'ny HTTPS, ny protokolan'ny serasera dia voahidy amin'ny alàlan'ny Transport Layer Security na, Secure Sockets Layer.
Famaritana sy fanafohezana (I)
IAA - Doka amin'ny fampiharana: Doka an'ny mpanao dokam-barotra amin'ny antoko fahatelo izay navoaka tamin'ny fampiharana finday tamin'ny alàlan'ny tambajotra doka.
IAP - Fividianana In-App: Zavatra novidina avy ao anaty rindrambaiko, mazàna fampiharana finday mandeha amin'ny finday smartphone na fitaovana finday na takelaka hafa.
ICA - Analytics an-tserasera mifangaro: Fanadihadiana mifandraika amin'ny atiny izay manome fomba fiasa azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny teknolojia artifisialy artifisialy (AI).
ICP - Mombamomba ny mpanjifa mety: Persona mpividy izay noforonina tamin'ny fampiasana angon-drakitra sy fahalalana marina. Izy io dia ny famaritana ny fahatsinjovan-javatra mety ho tadiavin'ny ekipan'ny varotrao. Ahitana fampahalalana momba ny demografika, fampahalalana momba ny jeografika ary toetra mampiavaka ny saina.
IDE - Tetik'asa fampandrosoana fampandrosoana: dia lozisialy amin'ny fananganana rindranasa izay manambatra ireo fitaovana fampiroboroboana mahazatra ho lasa mpampiasa mpampiasa sary tokana (GUI).
IDFA - Identifier ho an'ny mpanao dokam-barotra: dia fitaovana famantarana an-tsokosoko natolotry Apple ho an'ny fitaovan'ny mpampiasa. Mampiasa izany ny dokam-barotra hanarahana ny angon-drakitra mba hahafahan'izy ireo mandefa dokam-barotra namboarina. Miaraka amin'ny iOS 14, hampiasaina amin'ny alàlan'ny fangatahana opt-in fa tsy amin'ny alàlan'ny default.
ILV - Haingam-pandeha mitarika fidirana: Mitombo ny fandrefesana ny tahan'ny izay mitarika.
iPaaS - Sehatra fampidirana ho serivisy: Fitaovana mandeha ho azy ampiasaina hampifandraisina ireo rindranasa rindrambaiko izay apetraka amin'ny tontolo samihafa, ao anatin'izany ny rindranasa rahona sy ny fampiharana eo an-toerana.
IPTV - Fahitalavitra momba ny Internet Protocol: ny fandefasana atiny amin'ny televiziona amin'ny tamba-jotra Internet Protocol fa tsy amin'ny alàlan'ny endrika fahita lavitra amin'ny fahitalavitra sy satelita.
ISP - Mpanome tolotra aterineto: Mpanome fidirana Internet izay mety manome serivisy mailaka amin'ny mpanjifa na orinasa.
IVR - Valin-kafatra mifampiresaka: Ny valiny am-peo interactive dia teknolojia mamela ny olombelona hifandray amin'ny rafi-telefaona miasa amin'ny solosaina. Ny teknolojia taloha dia nampiasa feon-tariby an-tariby… ny rafitra vaovao dia mampiasa ny valiny amin'ny feo sy ny fanodinana ny fiteny voajanahary.
Famaritana sy fanafohezana (J)
Famaritana sy fanafohezana (K) Sales & Marketing (K)
KPI - Famantarana fampisehoana lehibe: sanda azo refesina izay mampiseho ny fahombiazan'ny orinasa iray mahatratra ny tanjony. Ny KPI avo lenta dia mifantoka amin'ny fahombiazan'ny orinasa amin'ny ankapobeny, ny KPI amin'ny ambaratonga ambany kosa dia mifantoka amin'ny fizotran'ny departemanta toy ny varotra, marketing, HR, fanampiana ary ny hafa.
Famaritana sy fanafohezana (L) amin'ny varotra sy varotra (L)
L2RM - Mitarika amin'ny fitantanana vola: Modely iray hiarahana amin'ny mpanjifa. Izy io dia mampiditra ny fizotrany sy ny refy ary misy ny tanjona amin'ny fahazoana mpanjifa vaovao, ny fivarotana mpanjifa efa misy ary ny fidiram-bola mitombo.
LAARC - Mihainoa, ekeo, fantaro, valio, hamafiso: Teknika fivarotana ampiasaina rehefa tojo valiny na fanoherana ratsy mandritra ny fotoana fivarotana.
LAIR - Mihainoa, ekeo, fantaro, avadiho: Iray amin'ireo teknika fifampiraharahana fanafohezana ny varotra. Ity iray ity dia ampiasaina hanoherana ny fanoherana amin'ny sehatry ny varotra. Henoy aloha ny ahiahin'izy ireo, ary avereno izy ireo mba hanaiky ny fahazoanao azy. Fantaro ny antony voalohany tsy hividianana sy hamerenany ny ahiahin'izy ireo amin'ny alàlan'ny famolavolana ny fanoherana amin'ny fomba tsara.
LAT - Fanarahana doka voafetra: Fampisehoana fampiharana finday ahafahan'ny mpampiasa misafidy ny tsy hanana ID ho an'ny Advertisers (IDFA). Amin'ny alàlan'ity alalana ity dia alefa ny IDFA-n'ny mpampiasa ka tsy hahita doka manokana kendrena ho azy ireo ilay mpampiasa satria raha ny fahitan'ny tambajotra dia tsy misy mombamomba azy ilay fitaovana.
LCP - Doko misy atiny lehibe indrindra: Ny refesin'ny Google ny pejin'ny pejin'ny mpampiasa sy ny fandefasana ny fahaizany (hafainganam-pandeha) ao aminy Vitaly Core Web.
LSTM - Fahatsiarovana mandritra ny fotoana fohy: karazana tambajotra tsy miova miverimberina. Ny tanjaky ny LSTM dia ny fahafahany mahatadidy fampahalalana mandritra ny fotoana maharitra ary mampihatra izany amin'ny lahasa ankehitriny.
Famaritana sy fanafohezana (M) Sales & Marketing
MAIDs - ID momba ny dokambarotra finday or Ireo doka finday: mpamaritra manokana, azo averina, tsy fantatra anarana mifandraika amin'ny fitaovan'ny mpampiasa finday ary tohanan'ny rafi-piasan'ny findainy. Ny MAID dia manampy ny mpamorona sy ny mpivarotra hamantatra hoe iza no mampiasa ny fampiharana azy ireo.
MAP - Sehatra Marketing Automation: Teknolojia manampy ny mpivarotra hanova ny vinavinany ho mpanjifa amin'ny alàlan'ny fanesorana ireo dingana avo lenta, miverimberina atao tanana miaraka amina vahaolana mandeha ho azy. Salesforce Marketing Cloud sy Marketo dia ohatra an'ny MAP.
MDM - Master Data Management: Dingana iray izay mamorona andian-drakitra fanamiana momba ny mpanjifa, vokatra, mpamatsy, ary orinasam-pandraharahana hafa avy amin'ny rafitra teknolojia samihafa.
ML - Machine Fianarana: AI sy ML dia matetika ampiasaina ampifamadihana, misy ny tsy fitoviana eo amin'ireo andianteny roa.
MMS - Serivisy fandefasana hafatra marobe: mamela ny mpampiasa SMS handefa atiny multimedia, ao anatin'izany ny sary, feo, fifandraisana an-telefaona ary rakitra video.
MNIST - Ivon-toerana nasionaly momba ny fenitra sy teknolojia namboarina: Ny tahiry MNIST dia iray amin'ireo tahiry benchmark malaza amin'ny fianarana milina.
MoM - Volana-Over-Volana: Ny fanovana naseho mifandraika amin'ny volana lasa teo. Ny MoM dia matetika miovaova kokoa noho ny fandrefesana isaky ny telo volana na taona mandavantaona ary hita taratra izany hetsika toy ny fialantsasatra, loza voajanahary ary olana ara-toekarena.
MPP - Fiarovana manokana ny mailaka: Teknolojia Apple manala ny mari-pamantarana misokatra (fangatahana pixel) amin'ny mailaka marketing ka tsy azo arahana ny mailaky ny mpanjifa.
MQA - Kaonty mahafeno fepetra amin'ny marketing: ny ABM mitovy amin'ny fitarihana mpitarika mahay. Tahaka ny MQL iray voamarika fa vonona hampita amin'ny varotra, ny MQA dia kaonty izay nampiseho haavon'ny fifamatorana mba hanondroana ny fahavononan'ireo mpivarotra.
MQL - Marketing mitarika mahay: Izay olona rehetra nifandray tamin'ny ezaky ny varotra nataonao dia nanondro fa liana kokoa amin'ny tolotra omenao izy ireo ary mety ho lasa mpanjifa dia MQL. Amin'ny ankapobeny dia hita eo an-tampon'ny na eo afovoan'ny fantsona, ny MQL dia azo kolokoloina na amin'ny marketing na amin'ny varotra hivadika ho mpanjifa.
MQM - Fivoriana mahafeno fepetra amin'ny marketing: MQMs dia famantarana fampisehoana lehibe voafaritra ho CTA virtoaly (antso ho amin'ny hetsika) manerana ny programa marketing nomerika rehetra sy ny hetsika virtoaly.
MR - Ny tena zava-misy: ny fampitambarana tontolo tena izy sy virtoaly hamokatra tontolo vaovao sy sary an-tsaina, izay misy ny zavatra ara-batana sy niomerika niara-niasa sy nifandray tamin'ny fotoana tena izy.
MRM - Fitantanana loharanom-bola amin'ny marketing: sehatra ampiasaina amin'ny fanatsarana ny fahaizan'ny orinasa mandrindra, mandrefy ary manatsara ny loharanom-barotra ao aminy. Anisan'izany ny loharanon-karena mifandraika amin'ny olombelona sy amin'ny sehatra.
MRR - Vola azo hatrany isam-bolana: Ny serivisy mifototra amin'ny famandrihana dia mandrefy ny vola azo vinavinaina andrasana isam-bolana.
MFA - Fanamarinana Multi-Factor: fiarovana fanampiny ampiasaina hiantohana ny fiarovana ireo kaonty an-tserasera mihoatra ny solonanarana sy teny miafina fotsiny. Ny mpampiasa dia miditra ny teny miafiny ary avy eo dia takiana hiditra ambaratonga fanampiny fanamarinana, indraindray mamaly amin'ny kaody alefa amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra, mailaka, na amin'ny alàlan'ny fampiharana fanamarinana.
Famaritana sy fanafohezana (N)
NER - Fanekena anarana nomena anarana: dingana iray manan-danja amin'ny maodely NLP. Entities nomena anarana dia manondro anarana mety ao anaty lahatsoratra - mazàna olona, ​​toerana na fikambanana.
NFC - Akaiky akaiky ny serasera: protokolan'ny serasera ho an'ny fifandraisana eo amin'ny fitaovana elektronika roa mihoatra ny halavany 4 cm na ambany. NFC dia manolotra fifandraisana haingam-pandeha haingam-pandeha miaraka amina fanamboarana tsotra izay azo ampiasaina hanamafisana ny fifandraisana tsy misy tariby azo atao.
NLP-NFanodinana ny fiteny atural: ny fandalinana ny tenin'olombelona voajanahary ao anatin'ny fianarana milina, mamorona rafitra mahatakatra tsara izany fiteny izany.
NLU - Fahatakarana ny fiteny voajanahary: Ny fahatakarana amin'ny fiteny voajanahary dia ny fomba ahafahan'ny faharanitan-tsaina artifisialy mandika sy mahatakatra ny tanjon'ny fiteny voahodina amin'ny alàlan'ny NLP.
NPS - Net Promoter Score: Metric iray ahazoana fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny fikambanana. Net Promoter Score mandrefy ny mety hisoroan'ny mpanjifanao ny vokatrao na serivisinao amin'ny hafa. Refesina amin'ny ambaratonga 0 - 10 ary ny aotra dia kely indrindra azo atoro anao.
NRR - Vola azo averimberina: ny totalin'ny vola miditra amin'ny kaonty vaoavao amin'ny rafitry ny varotrao ary ny fidiram-bola ampidirina isam-bolana amin'ny kaonty ankehitriny, mihena ny vola miditra amin'ny kaonty mihidy na mihena mandritra ny fe-potoana mitovy, mazàna refesina isam-bolana.
Famaritana sy fanafohezana (O) amin'ny varotra sy ny varotra (O)
OCR - OFanekena ny toetra amam-panahy: ny fizotry ny famantarana ny litera voasoratra na pirinty.
OOH - Avy-of-Home: Ny dokambarotra OOH na ny dokambarotra an-kalamanjana, fantatra amin'ny hoe haino aman-jery ivelan'ny trano na haino aman-jery ivelany, dia dokambarotra izay mahatratra ny mpanjifa raha any ivelan'ny tranony izy ireo.
OTT - Over-Ny-Top: serivisy fampitam-baovao mivantana izay atolotra mivantana amin'ny mpijery an-tserasera. Sehatra fahitalavitra, haino aman-jery ary fahitalavitra mandeha amin'ny zanabolana OTT.
Fivarotana sy fanaovan-tsoa sy fanafohezana (P)
PDF - Rakitra antontan-taratasy azo zahana: PDF dia endrika fisie cross-platform novolavolain'i Adobe. PDF dia endrika fisie zanatany ho an'ireo fisie azo alaina sy novaina tamin'ny alàlan'ny Adobe Acrobat. Ny antontan-taratasy avy amin'ny rindranasa rehetra dia azo ovaina ho PDF.
PPC - Aloavy Per Click: Mpamoaka iray izay miampanga ny mpanao dokam-barotra isaky ny mandray andraikitra (tsindrio) amin'ny doka. Jereo koa CPC.
PFE - Probabilistic Embeddings amin'ny tarehy: fomba iray hanaovan-tsoa ny tarehy amin'ny toerana tsy voafehy.
PII - Information indraindray azo fantarina: Ny teny monina any Etazonia ho an'ny angona nangonina na novidiana izay, amin'ny azy manokana na rehefa atambatra amin'ny angona hafa, dia azo ampiasaina hamantarana olona iray.
PIM - Product Management Management: fitantanana fampahalalana takiana amin'ny tsena sy fivarotana vokatra amin'ny alàlan'ny fantsom-pizarana. Azo ampiasaina hizara / handraisana vaovao amin'ny haino aman-jery toy ny tranokala, katalaogin-pirinty, rafitra ERP, rafitra PLM, ary fahana data elektronika ho an'ny mpiara-miombon'antoka.
PLM - Product Management Lifecycle Management: ny fizotran'ny fitantanana ny androm-piainan'ny vokatra iray manontolo hatramin'ny nanombohany, tamin'ny alàlan'ny famolavolana sy ny fanamboarana injeniera, hatramin'ny serivisy sy fanariana ireo vokatra vita.
PM - Mpitantana tetik'asa: ny fampiharana ny fanombohana, ny fandrindrana, ny fiaraha-miasa, ny fanatanterahana, ny fanarahana ary ny fanidiana ny asan'ny ekipa iray hahatratrarana tanjona sy fandaharam-potoana.
PMO - Biraon'ny fitantanana tetikasa: departemanta ao anatin'ny fikambanana iray mamaritra ny fenitra momba ny fitantanana ny tetikasa.
PMP - Tetikasa matihanina amin'ny fitantanana tetikasa: dia fanendrena matihanina ekena iraisam-pirenena atolotry ny Institute Management Project (PMI).
PQL - Bika matoanteny: dia prospect izay niaina soatoavina manan-danja sy fananganana vokatra amin'ny fampiasana vokatra SaaS amin'ny alàlan'ny modely maimaimpoana na freemium.
Laharana pejy: Ny laharam-pejy dia voafaritry ny algorithm ampiasain'i Google izay manome lanja ny isa tsirairay amin'ny tranokala miorina amin'ny fari-pitsipika miafina maro samihafa. Ny mizana ampiasaina dia 0 - 10 ary io isa io dia faritana amina anton-javatra maromaro ao anatin'izany ny rohy miditra, ary ny laharam-pejy amin'ireo tranonkala mifandray. Ny haavon'ny pejinao avo kokoa, ho an'ny fifandraisany sy manan-danja kokoa amin'ny tranokalanao dia heverin'i Google.
Fifandraisana amin'ny vahoaka: Ny tanjon'ny PR dia ny hisarika ny saina maimaimpoana amin'ny orinasanao. Mampiseho ara-stratejika ny orinasanao amin'ny fomba vaovao sy mahaliana izy io fa tsy tetika fivarotana mivantana.
PRM - Fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa: rafitra rafitra, paikady ary sehatra manampy ny mpivarotra hitantana ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa.
PSI - PageSpeed ​​Insights: The Google Insight of PageSpeed Ny isa dia manomboka amin'ny 0 ka hatramin'ny 100 isa. Ny isa avo kokoa dia tsara kokoa ary ny isa 85 na ambony dia manondro fa mahomby ny pejy.
Famaritana sy fanafohezana (Q)
QOE - Quality ny Experience: Ny kalitaon'ny traikefa dia refesin'ny fahafinaretana na fahasosorana amin'ny zavatra niainan'ny mpanjifa amin'ny serivisy. Manokana ho an'ny horonan-tsary, QoE dia voafaritry ny kalitaon'ny Video nalefa tany amin'ny fitaovan'ny mpampiasa, ary ny kalitaon'ny playback rehefa mampiseho ny Video amin'ny fitaovan'ny mpampiasa.
QoS - Kalitaon'ny serivisy:
Serivisy ho an'ny mpanjifa - Ny QoS dia refesin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa izay omen'ny mpanjifanao fanampiana, serivisy, na ekipa kaontinao ho an'ny mpanjifanao, mazàna voaangona amin'ny alàlan'ny fanadihadiana matetika.
Tambajotra: QoS dia ny fahaizana manome laharam-pahamehana ho an'ny fampiharana, mpampiasa, na angon-drakitra samihafa, na hiantohana ny haavon'ny fahombiazany.
Famaritana sy fanafohezana (R) Sales & Marketing (R)
REGEX - Fanehoana tsy tapaka: fomba fampivoarana hikarohana sy hamantarana lamina tarehin-tsoratra ao anatin'ny lahatsoratra na hifanaraka na hanoloana ny lahatsoratra. Ny fiteny maoderina fandaharana rehetra dia manohana Expression Regular.
REST - Famindrana ny fanjakana Representational: Fomban-tsoratry ny famolavolana API ho an'ireo rafitra zaraina hiresaka amin'ny alàlan'ny HTTP.
RFID - Famantarana ny radio-matetika: mampiasa saha elektromagnetika hamantarana sy hanarahana mandeha ho azy ny marika mifatotra amin'ny zavatra. Ny rafitra RFID dia misy transponder radio kely, mpandray radio ary mpandefa.
RFP - Mangataka Proposal: Rehefa misy orinasa mitady solontenan'ny marketing dia hamoaka RFP izy ireo. Ny orinasam-barotra dia manomana tolo-kevitra mifototra amin'ny torolàlana napetraka ao amin'ny RFP ary manolotra izany amin'ny mpanjifa mety.
RGB - Red, Green, Blue: maodely miloko fanampiny izay ampiarahan'ny hazavana mena, maitso ary manga miaraka amin'ny fomba maro samihafa hamokarana loko marobe. Ny anaran'ny maodely dia avy amin'ny fiandohan'ny loko telo voalohany, mena, maitso ary manga.
RMN - Tambajotra fampahalalam-baovao: sehatra dokambarotra izay tafiditra ao anaty tranokala, fampiharana, na sehatra nomerika hafa, mamela ny marika hanao dokambarotra amin'ny mpitsidika ny mpivarotra.
RNN - RTambajotra Neural eo anelanelany: karazana tambajotra neural izay misy tadivavarana. Ny firafiny dia natao hamelana ny fampahalalana voavolavola teo aloha hisy fiantraikany amin'ny fomba fandikana ny vaovao ny rafitra.
ROAS - Miverina amin'ny fandaniana doka: metric marketing izay mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny fandrefesana ny vola azo isaky ny dolara laniana.
ROI - Miverena amin'ny fampiasam-bola: Ny iray amin'ireo fanafohezana ny varotra mifandraika amin'ny kaonty, ity dia metrikan'ny fahombiazana izay mandrefy ny tombom-barotra ary mikajiana amin'ny fampiasana ny raikipohy ROI = (fidiram-bola) / vidiny. Ny ROI dia afaka manampy anao hamantatra raha toa ny fampanjariam-bola mety hitranga eo alohaloha sy ny vidiny mitohy na raha tokony hotohizana na hatsahatra ny fampiasam-bola na ezaka.
ROMI - Fiverenana amin'ny fampiasam-bola amin'ny marketing: Ity dia metrikan'ny fahombiazana izay mamaritra ny tombom-barotra ary kajy amin'ny fampiasana ny formula ROMI = (vola miditra - vidin'ny marketing) / vidiny. ROMI dia afaka manampy anao hamantatra raha mety ny fandraisana andraikitra ara-barotra amin'ny vidiny mialoha sy amin'ny vidiny mitohy na raha tokony hotohizana na hatsahatra ilay ezaka.
RPA - Fanodinana automatique robotic: teknolojia fizotran'ny fizotran'ny asa aman-draharaha miorina amin'ny robots rindrambaiko fanoharana na mpiasa an-tsokosoko / dizitaly.
RSS - Syndication tena tsotra: RSS dia famaritana mari-pahaizana XML amin'ny syndication sy fizarana atiny. manome ny mpivarotra sy ny mpampanonta fomba iray hanaterana sy hanaovan-tsoa ny atiny. Mahazo fanavaozana mandeha ho azy ny mpamandrika isaky ny mivoaka ny atiny vaovao.
RTB - Fandefasana fotoana tena izy: fitaovana entina mividy sy mivarotra isam-bolana, amin'ny alàlan'ny lavanty fandaharana eo noho eo.
RTMP - Protokol fandefasana hafatra amin'ny fotoana tena izy: protokol iray mifototra amin'ny TCP novolavolain'i Macromedia (Adobe) tamin'ny taona 2002 handefasana feo, horonantsary ary data amin'ny Internet.
Famaritana sy fanafohezana (S) ny varotra sy ny varotra (S)
SaaS - Software toy ny Service: SaaS dia lozisialy natolotry ny orinasa antoko fahatelo amin'ny rahona. Ny orinasam-barotra dia matetika mampiasa SaaS mba hahafahan'ny fiaraha-miasa mora kokoa. Mitahiry fampahalalana amin'ny rahona izy ary misy ohatra ao anatin'izany ny Google Apps, Salesforce, ary Dropbox.
SAL - Varotra ekena ekena: Ity dia MQL izay nampitaina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny varotra. Nodinihina ho an'ny kalitao ary mendrika hotadiavina. Ny famaritana ny mason-tsivana ahazoana mahafeno fepetra sy ny MQL ho tonga SAL dia afaka manampy ny repoblika mivarotra hanapa-kevitra raha tokony hampiasa fotoana sy ezaka hanarahana fanarahana.
SDK - Kit ny mpamorona rindrambaiko: Mba hanampiana ny mpamorona manomboka voalohany, matetika ny orinasa dia mamoaka fonosana mba hampidirana kilasy na ireo fiasa ilaina mora foana amin'ny tetikasa soratan'ilay mpamorona.
SDR - Solontenan'ny fampandrosoana ny varotra: Andraikitry ny varotra izay tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana sy ny tombontsoa vaovao.
SEM - Search Engine Marketing: Matetika ilazana ny varotra motera fikarohana manokana amin'ny doka pay-per-click (PPC).
SEO - Search Engine Optimization: Ny tanjon'ny SEO dia ny manampy tranokala na atiny iray “hita” amin'ny internet. Ny motera fikarohana toa an'i Google, Bing, ary Yahoo dia manaparitaka atiny an-tserasera raha ilaina. mampiasa teny lakile mifandraika ary ny teny lakile long-tail dia afaka manampy azy ireo hanondro tranonkala iray araka ny tokony ho izy ka rehefa manao fikarohana ny mpampiasa dia mora hita izany. Betsaka ny anton-javatra misy fiantraikany amin'ny SEO ary ny fiovan'ny algorithmic tena izy dia fampahalalana voaaro voaaro akaiky.
SERP - Pejy valin'ny Search Engine: Ilay pejy izay hipetrahanao rehefa mitady teny lakile na teny manokana amin'ny motera fikarohana ianao. Ny SERP dia mitanisa ireo pejy laharana rehetra ho an'io teny fanalahidy na teny io.
SFA - Salesforce Automation: Fanafohezana ny varotra ho an'ny rindrambaiko izay manodina ny hetsika fivarotana toy ny fanaraha-maso ny lisitra, ny varotra, ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ary ny famakafakana ny vinavina sy ny vinavina.
SKU - Fitaovana fitehirizana tahiry: Famantarana tokana ny entana hovidiana. SKU iray matetika dia voahodidin'ny kaody kaody ary ahafahan'ny mpivarotra manara-maso sy manara-maso ny fivezivezena ny lisitra. Ny SKU dia mazàna amin'ny fitambarana alfanumerika misy litera valo na mihoatra.
SLA - Fifanarahana amin'ny serivisy - Ny SLA dia antontan-taratasy ofisialy ofisialy izay mamaritra ny andraikitry ny marketing sy ny varotra amin'ny fitarihana sy ny fizotry ny varotra. Izy io dia mamaritra ny habetsahana sy ny kalitaon'ny marketing tsy maintsy ateraky ny varotra ary ny fomba hitondran'ny ekipa mpivarotra fitarihana tsirairay.
SM - Social Media: Ohatra amin'izany ny Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok, ary Youtube. Ireo tranonkala SM dia sehatra ahafahan'ny mpampiasa mandefa atiny ao anatin'izany ny horonan-tsary sy feo. Ny sehatra dia azo ampiasaina amin'ny atiny fandraharahana na an'ny tena manokana ary mamela ny fivezivezena ara-organika ary koa ny lahatsoratra tohana na misy karama.
SMART - Manokana, azo refesina, azo tratrarina, azo antenaina, manam-potoana: Acronym ampiasaina hamaritana ny fizotry ny fametrahana tanjona. Manampy anao amin'ny famaritana mazava sy ny fametrahana tanjona amin'ny alàlan'ny famaritana ireo dingana ilaina amin'ny fanatanterahana izany.
SMB - Orinasa kely sy salantsalany: Fanaovan-anarana izay mamaritra ny orinasa misy eo anelanelan'ny 5 sy 200M amin'ny vola miditra. Miresaka ihany koa ny mpanjifa misy mpiasa 100 na vitsy (kely) hatramin'ny 100 - 999 mpiasa (salantsalany)
SME - Foto-kevitra Expert: fahefana iray amin'ny faritra na lohahevitra manokana izay loharanom-pahalalana hanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifanao. Ho an'ny mpivarotra, ny mpanjifa mety, ny mpanjifa fototra, ny solontenan'ny varotra ary ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia matetika SME izay manome fidirana mitsikera.
Social Media Marketing: Fampiasana sehatra media sosialy ho toy ny fomba hampiroboroboana ny atiny, hanaovana dokambarotra amin'ny vinavina, hifandraisana amin'ireo mpanjifa, ary hihainoana fotoana mety na ahiahy manoloana ny lazanao.
SMM - Social Media Management: Ny fizotrany sy ny rafitra ampiasain'ny fikambanana hametrahana ny paikadiny amin'ny haino aman-jery sosialy.
SMS - Serivisy hafatra fohy: Iray amin'ireo fenitra tranainy indrindra ny mandefa hafatra miorina amin'ny alàlan'ny finday.
SOAP - Protocol Access Access Simple: SOAP dia famaritana protokolan'ny fandefasana hafatra ho an'ny fifanakalozana fampahalalana voarindra amin'ny fampiharana ireo serivisy web amin'ny tambajotra solosaina
SPIN - Toe-javatra, olana, fiantraikany, filana: Teknika fivarotana izay fomba "maratra sy famonjena". Hitanao ny teboka mampanaintaina ny prospect ary "maharary" azy ireo amin'ny fanitarana ny vokany mety. Avy eo tonga amin'ny "famonjena" miaraka amin'ny vokatrao na serivisinao ianao
Varotra fitarihana mendrika: Ny SQL dia mitarika izay vonona ho tonga mpanjifa ary mifanaraka amin'ireo mason-tsivana efa voafaritra mialoha ho an'ny fitarihana ambony kalitao. Ny SQL dia matetika no zahana amin'ny marketing sy ny varotra alohan'ny hanendrena azy ho mpitarika mendrika.
Structured Word Language Query: fiteny ampiasaina amin'ny fandaharana ary natao hitantanana ny angona voatazona ao amin'ny rafitra fitantanana data base, na amin'ny fanodinana renirano amin'ny rafitra fitantanana renirano data.
SRP - Sehatra fifandraisana sosialy: Sehatra iray ahafahan'ny orinasa manara-maso, mamaly, mamolavola, mamorona ary mankato ny atiny amin'ny tranokala media sosialy.
SSL - Secure Sockets Layer: protokol cryptographic natao hanomezana fiarovana ny fifandraisana amin'ny tambajotran'ny solosaina.
SSP - Sehatry ny famatsiana: Sehatra iray ahafahan'ny mpanonta manome lisitra ho an'ny tsenan'ny dokam-barotra hahafahan'izy ireo mivarotra ny habaka doka amin'ny tranokalan'izy ireo. SSP dia matetika mifangaro amin'ny DSPs mba hanitarana ny tratrany sy ny fahafahany mitarika fidiram-bola amin'ny dokam-barotra.
STP - Segmentation, Fikendrena, toerana: Ny maodely marketing an'ny STP dia mifantoka amin'ny fahombiazan'ny varotra, ny fisafidianana ireo sehatra sarobidy indrindra amin'ny orinasa iray, ary avy eo ny famolavolana paikady fifangaroan'ny marketing sy ny fametrahana ny vokatra isaky ny sehatra.
Famaritana sy fanafohezana ary fanafohezana (T)
TAM - Mpitantana kaonty teknika: manam-pahaizana manokana momba ny vokatra miasa miaraka amin'ireo fikambanana IT handrafetana tetikady mahomby amin'ny fametahana fahombiazana ary hanampy amin'ny fahatsapana fahombiazana sy fitomboana tsara indrindra.
TLD - Domain ambony: ny sehatra amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny rafitra anaran'ny Domain hierarchical Domain of the Internet aorian'ny domain root. Ohatra: www.google.com:
com = sehatra avo lenta
TTFB - Fotoana voalohany Byte: fanondroana ny fandraisan'ny mpizara tranonkala na loharanom-pahalalana mandrefy ny faharetan'ny mpampiasa na ny mpanjifa mangataka HTTP mankany amin'ny byte voalohany amin'ny pejy izay azon'ny mpizahatany na kaody nangatahina (ho an'ny API).
Varotra sy varotra varotra (U)
UCaaS - Serasera mitambatra ho serivisy: ampiasaina hampidirana fitaovana fifandraisana anatiny marobe amin'ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampiasana loharanon-karena mifototra amin'ny rahona.
UGC - Votoatiny noforonin'ny mpampiasa: fantatra ihany koa amin'ny hoe atin'ny vatan'ny mpampiasa (UGC), dia ny atiny rehetra, toy ny sary, horonan-tsary, lahatsoratra, tsikera ary audio, izay navoakan'ny mpampiasa tamin'ny sehatra an-tserasera.
UGC - Atiny atolotry ny mpampiasa: fantatra koa amin'ny hoe atin'ny namboarina ho an'ny mpampiasa (UCC), dia ny atiny rehetra, toy ny sary, horonan-tsary, lahatsoratra, tsikera ary audio, izay navoakan'ny mpampiasa tamin'ny sehatra an-tserasera.
UI - User Interface: Ny tena endriny izay ampifandraisin'ny mpampiasa.
URL - Locator loharano fanamiana: Fantatra amin'ny anarana hoe adiresy tranonkala ihany koa, io ilay loharano an-tranonkala izay mamaritra ny toerana misy azy amin'ny tambajotran'ny solosaina ary ny mekanisma hakana azy.
USP - Fampisehoana mivantana: Fantatra amin'ny anarana hoe a teboka fivarotana tsy manam-paharoa, ny paikadim-barotra amin'ny fanaovana tolo-kevitra tokana ho an'ny mpanjifa naharesy lahatra azy ireo hisafidy ny marika na hivadika amin'ny marikao.
UTM - Module fanarahana ny Urchin: karazany dimy amin'ny masontsivana URL ampiasain'ny mpivarotra hanarahana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra an-tserasera manerana ny loharanom-pifamoivoizana. Nampidirin'i Urchin teo alohan'i Google Analytics izy ireo ary tohanan'ny Google Analytics.
UX - User Experience: Ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny marikao mandritra ny fizotran'ny fividianana. Ny traikefan'ny mpanjifa dia mitaona ny fahitan'ny mpividy ny marikao. Ny traikefa tsara dia manova ny mety ho mpividy ho mpanjifa ary mitazona ny mpanjifa ankehitriny tsy hivadika.
Varotra sy fanafohezana (V)
vam - Sehatra fanadihadiana sy fitantanana horonantsary - sehatra mampiasa ny fianaran'ny AI sy ny milina hanampiana ireo mpampiasa hamantatra haingana ireo fotoana manan-danja ao anaty atiny video, hahafahan'izy ireo mandamina, mikaroka, mifanerasera ary mizara amin'ny fomba mora sy mahomby.
VOD - Video Amin'ny fangatahana: dia rafitra fizarana haino aman-jery mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny fialamboly horonantsary tsy misy fitaovana fialamboly horonantsary nentim-paharazana ary tsy misy fetran'ny fandaharam-potoana fampielezam-peo tsy miovaova.
VPAT - Template fidirana an-tsitrapo amin'ny vokatra an-tsitrapo: mamintina ny valin'ny fanadihadiana momba ny fidirana amin'ny Internet ary mirakitra ny faran'ny vokatra na serivisy mifanaraka amin'ny Fizarana 508 Fitsipika momba ny fahazoana miditra, torolàlana WCAG, ary fenitra iraisam-pirenena.
VR - Virtual Reality: Simulateur novokarin'ny solosaina amin'ny tontolo telo-dimensional izay azo ampifandraisina amin'ny fampiasana fitaovana elektronika manokana, toy ny fiarovan-doha misy efijery ao anatiny na fonon-tanana misy fakan-tsarimihetsika.
Fivarotana sy fanaovan-tsoa sy fanafohezana (W)
WCAG - Torolàlana momba ny fahazoana votoatin'ny tranonkala - manome fenitra iraisana iraisana momba ny fahazoana miditra amin'ny Internet izay mifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay sy ny fikambanana ary ny governemanta iraisam-pirenena.
WWW - World Wide Web: fantatra amin'ny anarana hoe Web, dia rafitra fampahalalana izay ahitan'ny Uniform Resource Locators ireo antontan-taratasy sy loharanom-pahalalana hafa, izay mety ampifandraisin'ny hypertext, ary azo idirana amin'ny Internet.
Varotra sy fanafohezana (X)
XML - Fiteny fanamarihana eXtensible: Ny XML dia fiteny fanamarihana ampiasaina handefasana angon-drakitra amin'ny endrika izay vakina amin'ny olombelona sy vakina amin'ny masinina.